Mivoaka amin'ny bisikileta - Ny tombontsoa lehibe entin'izany | Bezzia
Susana godoy | 20/07/2021 16:00 | fanatanjahan-tena
Ny karazana fanatanjahantena rehetra dia hitrandraka oksizenina ary vokatr'izany dia hamela antsika hanana saina madio sy vatana salama sy salama kokoa. Noho izany, tsy misy toa azy mandeha bisikileta, izay iray amin'ny fanatanjahan-tena mahazatra ary hamela antsika tombontsoa lehibe tokony ho fantatrao raha mbola tsy nanao an'izany ianao.
Tsy misy fisalasalana, ankehitriny miaraka amin'ny toetrandro mahafinaritra tianao handeha hitsangatsangana, raha tsy mafana loatra. Saingy hataonay amin'ny bisikilety ity satria ity no mpiara-miasa akaiky indrindra aminay. Aza adino izay rehetra azony atao ho antsika, satria tsy zavatra kely izany.
1 Ny bisikileta dia mampihena ny adin-tsaina
2 Manazava ny vatana ianao
3 Manamafy ny fo ianao
4 Hihena ianao
5 Hampihena ny cellulite ianao
Ny bisikileta dia mampihena ny adin-tsaina
Misy vanim-potoana izay, eo anelanelan'ny trano sy ny asa ary koa ny olana hafa, dia miteraka fihenjanana be isika. Ka indraindray tsy haintsika akory ny manafoana izany amin'ny fiainantsika. Mazava ho azy fa tsy mora ny manao veloma, ka amin'ny fanatanjahan-tena kely angamba dia hatosika bebe kokoa hatrany isika. Ny fandehanana bisikileta no hahafahanao manadio ny sainao ankoatry ny fanatanjahantena mihitsy. satria hahita toerana vaovao ianao, varavarana misokatra ary hitarika anao tsy hieritreritra ireo olana rehetra anananao izany fa hifantoka amin'ny tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Raha mahazo kely an'io vitamina io isan'andro ianao dia aleo ho haingana noho ny noeritreretinao ho tsara kokoa.
Manazava ny vatana ianao
Marina fa ny hozatra hiasantsika indrindra dia ny quadriceps, noho izany, izy ireo ihany koa no voalohany manana feo. Na dia tsy afaka manadino izany koa isika mihamatanjaka ny zanak'omby sy ny vody. Ny zavatra tsy maintsy fehezintsika dia fihetsika tsara hanamafisana ny faritra aoriana. Amin'izay fomba izay ahazoan'ny faritra lumbar tombony tsara indrindra, ny fanaintainana dia efa tena lavitra be.
Manamafy ny fo ianao
Ny tokony hataontsika dia manomboka kely tsikelikely ary mampitombo ny hamafiny. Amin'izany fomba izany, ny vatana dia tsy mijanona ho stagnant ary afaka mahita ny valiny haingana araka izay azo atao amin'ny vatana isika fa amin'ny fahasalamantsika koa. Amin'ity tranga ity dia miresaka isika hamafiso ny foToy ny amin'ny pedal, ny hataontsika dia ny fandefasana rà mankany am-po amin'ny fomba mahery vaika kokoa, izay hamokatra oksizenina amin'ny vatana iray manontolo. Ao no hanamafisantsika ny fo araka izay tiantsika.
Toy ny amin'ny fanatanjahan-tena mendrika ny sira, ny Ny fahaverezan'ny lanja dia iray amin'ireo toe-javatra mitranga haingana ireo. Fa marina fa noho izany dia tsy maintsy mijanona tsy tapaka isika ary miaraka amin'ny fampiharana sakafo tsara. Ny iray mahay mandanjalanja izay hilalaovantsika amin'ny legioma, dia hatsipintsika ny sakafo efa nandrahoina na nendasina, ary koa ny mofomamy. Satria voalaza fa raha manaraka gadona malefaka amin'ny bisikileta ianao dia afaka mamoy kaloria mihoatra ny 500 isan'ora. Noho izany, efa fandrisihana tsara ny hidina hiasa.
Hampihena ny cellulite ianao
Tombony lehibe iray hafa io. Satria misy olona maro mahita ny fomba nahatonga ny cellulite hiditra amin'ny fiainany. Voasary voasary Voakasik'izany ny faritry ny tongony sy ny vodiny, na dia marina aza fa mety hiparitaka amin'ny faritra hafa koa izy io. Ny fivoahana bisikileta dia hampihena ity olana ity, satria mihetsika tsy tapaka ny tongotra ary izany dia miteraka vokarin'ny otra. Midika izany fa tsy misy fanangonana tavy ao amin'ny vatana. Raha efa tianao ny mivoaka miaraka amin'ny bisikileta, ankehitriny dia ho tianao kokoa izany, noho ny fahalalana ireo tombontsoa ireo izay ho hitanao vokatr'izany amin'ny vatanao. Efa mandeha bisikileta ve ianao isan'andro?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Tombony azo amin'ny bisikileta